आमा रक्सीले झ्याप ! ११ बर्षको छोरा यस्तो अवस्थामा, हातको उपचारको लागि सडकमा गीत गाउँछन् (भिडियो) – Complete Nepali News Portal
आमा रक्सीले झ्याप ! ११ बर्षको छोरा यस्तो अवस्थामा, हातको उपचारको लागि सडकमा गीत गाउँछन् (भिडियो)
Tika Prasad Amgain January 27, 2019
आमा जाँड खान्छिन्, जाँडले उनी पागल जस्तै हुन्छिन् । जाँडको कारण समयमा बालबच्चाको हेरचाह पुगेन । अम्बाको रुखबाट लडेर हात भाँचिएपछि उनको राम्रोसंग उपचार भएन, हाल बाँङ्गो हात लिएर उनी सडकमा गीत गाउँदै हिडिरहेका छन्, परिवारबाट टाढा छन् । उनी हुन् ११ बर्षिय बिक्रम लावती ।
रहर हैन बाध्यता पर्यो उनलाई सडकमा गाउँन । सानो उमेरबाट घर छोडेर आफ्नो काकाको घरमा बस्तै आएका बिक्रमको पारिवारिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ । बुबा भारतमा काम गर्न जानुभएको छ तर उहाको कमाईले परिवारको छाक टार्न र सामान्य कपडा लगाऊन धौ–धौ पर्छ ।
जादुमय स्वरभएका बिक्रमको दैनिक कमाई औसतमा पाँच सय हो । उनी अहिले काका संग बसेको १ बर्ष पुग्यो । बिक्रम दिनभरी सडकमा हुन्छन र रात परेपछि कहिले काकाको घर कहिले सडकको पेटीमानै रात बिताउछन् ।